I-Cozy One Bedroomed Flatlet - I-Airbnb
I-Cozy One Bedroomed Flatlet
Bluff, KwaZulu-Natal, iNingizimu Afrika
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Natalie
Ifulethi lethu elincane, elinekamelo lokulala nekhishi elincane lilungele umuntu odinga indawo yokuhlala ubusuku obumbalwa ngaphandle kwebhizinisi. Ukubukwa kwethu kolwandle okuthulile kuyahlaba umxhwele, imikhomo + ama-dolphins ayibhonasi yokuphumula nge-pooliday.
Iphedi encane igcwale endaweni esogwini. Iyunithi iseduze nebhishi nezitolo futhi sinezinxanxathela zezitolo ezimbili ezingaba yikhilomitha elilodwa. Sinendawo yokubhukuda neyokuzivocavoca emagcekeni. Indawo yokuphumula ihlanganisa usofa wokulala onomabonakude. Kukhona umbhede olala abantu ababili eBatcheler Pad yethu, ovumela abantu ababili ukuba bahlale kodwa iyunithi ifanele umuntu oyedwa. Usofa wokulala ungenziwa njengombhede olala umuntu oyedwa. Iyunithi ngeke ithathe abantu abangaphezu kukabili. Indawo yokubhukuda/indawo yokosa inyama iyatholakala ukuze isetshenziswe yizivakashi kuphela. Indawo enhle ye-braai/i-barbeque yezivakashi yokuphumula nokuzijabulisa. Siphinde siziqhayise ngokubukwa okumangalisayo kwamahlengethwa adlala emagagasini kanye nemikhomo eletha amathole abo amasha aseduze nogu ukuze sibavikele ezintweni ngezikhathi ezithile zonyaka.
Siyaziqhenya nge-Bluff National Golf Course yethu ehamba emgwaqweni, kanye nesifundo se-mache sabasafufusa kulabo abafuna injabulo yokugibela lelo bhola elimhlophe.
Izingubo zokugqoka zingalungiselelwa ukuthi zenzelwe izivakashi ngenkokhiso encane eyengeziwe.
4.70 · 112 okushiwo abanye
Ngeke ube nesithukuthezi e-Sodurba. Ngamabhishi amahle ongaya kuwo, ungagibela amagagasi ngenjabulo, i-paddleski, i-snorkel, i-spearfish, ukuya ku-crayfishing noma ukudoba olwandle usuku lonke. Ungathuthukisa handicap yakho kwelinye best igalofu. Khuluma nemvelo emizileni emide edlula ezigodlweni zemvelo ezihlukahlukene. Hamba ngezinyawo. Hamba phakathi kwetheku, uvakashele izimpawu zezwe ezaziwayo eziningi noma uye ohambweni lwemfundo yezemvelo. Futhi yilokho ngaphambi kokuba ucubungule impilo enkulu yasebusuku!
*Funda indlela yokutshuza ngeShark
* Diving- Igazi
Reef * Imicimbi yezemidlalo
sealife * Ihhashi Ukugibela
* I-Kite nomoya surfing
* Amafulethi okudoba olwandle olujulile
I-snorkelling * I-Bluff National Park Golf Course Beach ingenye yezindawo zethu eziyinhloko zokutshuza emagagasini e-KwaZulu Natal, eThekwini. Imincintiswano eminingi yokutshuza ibanjwe ebhishi yethu.
Ibhishi elithandekayo elinezindawo zokubhukuda ezicoceke kakhulu. Sinezindawo zokudlela ezithandekayo phansi ebhishi nesitolo esikhulu sekhofi (i-Heidis Cafe) ongakwazi ukusivakashela, ngemva kokuhamba ibanga elide ogwini.
Umbungazi uyatholakala izikhathi eziningi ukusiza izivakashi nganoma yimiphi imibuzo noma imibuzo ezingase zibe nayo. Ngiye ngafaka nezincwadi kuyunithi yazo zonke izindawo engingazivakashela eThekwini nasezindaweni ezizungezile.
Izidlo eziyisisekelo eziqandisiwe ezithengwe enkampanini yezokupheka yendawo ziyatholakala futhi zingahlelwa ngumbungazi kulabo abangafuni ukupheka nokufuna ubusuku bokuphumula. Kukhona nezindawo eziningi zokudlela kanye nezindawo zokudla okusheshayo ezingaphansi nje komgwaqo zokudla okumnandi.
Umbungazi uyatholakala izikhathi eziningi ukusiza izivakashi nganoma yimiphi imibuzo noma imibuzo ezingase zibe nayo. Ngiye ngafaka nezincwadi kuyunithi yazo zonke izindawo engin…
Hlola ezinye izinketho ezise- Bluff namaphethelo